China TUBE-1105-2 imboni nabakhiqizi |I-Kingflex
Ukusebenza komkhiqizo okuhle kakhulu kuhlangabezana nezinhlelo zokusebenza ezihlukene Ngerabha ye-nitrile njengento eluhlaza eyinhloko, ifakwe amagwebu entweni eguquguqukayo yerabha-yepulasitiki yokuvikela ukushisa enamabhamuza avaliwe ngokuphelele.Ukusebenza kahle komkhiqizo kwenza umkhiqizo usetshenziswe kabanzi ezindaweni ezihlukahlukene zomphakathi, izitshalo zezimboni, amagumbi ahlanzekile kanye nezikhungo zemfundo yezokwelapha.
Ngenjoloba ye-nitrile njengento eyinhloko eluhlaza, ifakwe amagwebu entweni eguquguqukayo yerabha-yepulasitiki yokushisa ukushisa enamabhamuza avaliwe ngokuphelele, okwenza umkhiqizo usetshenziswe kabanzi ezindaweni ezihlukahlukene zomphakathi, izitshalo zezimboni, amakamelo ahlanzekile kanye nezikhungo zemfundo yezokwelapha.
Imikhiqizo ye-Kingflex insulation isidlulile izitifiketi ze-BS476, UL94, CE, AS1530,DIN, REACH kanye ne-Rohs.Ikhwalithi iqinisekisiwe.
I-Kingflex, inhlanganisela yokukhiqiza nokuhweba, ikhiqiza futhi ithekelise imikhiqizo yokugqumisa igwebu lenjoloba iminyaka engaphezu kwengu-40 kusukela ngo-1979. Siphinde sibe eNyakatho yomfula i-Yangtze--imboni yokuqala yezinto ezifakwa ngaphakathi.Imboni yethu ithatha 130000 square metres.Sineworkshop ekhanyayo nendawo yokugcina impahla ehlanzekile.
Olandelayo: I-Ultra Low Temperature Rubber Foam Insulation
Ishidi Legwebu le-Heat Insulation Rubber
I-self-adhesive Rubber Insulation Roll
Ipuleti lepulasitiki lerabha 1